China Double Ribbon Mixer Manufacture and Factory | tampon
1. Miaraka amin'ny fanamarinana CE.
2. Momba ny fonony, mampiasa dingana fanamafisana ny hiondrika isika, afaka mampihena ny lanjan'ny sarom-bilany izy io ary miaraka amin'izay, afaka mitazona ny tanjaky ny sarony.
3. Momba ny zorony 4 amin'ny sarom-bilany, manao ny famolavolana zoro boribory izahay, ny tombony dia tsy misy faran'ny maty hanadiovana sy ho tsara tarehy kokoa.
4. peratra famehezana silika, vokatra azo antoka tsara, tsy misy vovoka mivoaka rehefa mifangaro.
5. Taratasy fiarovana. Manana fiasa 3 izy:
A. fiarovana, hiarovana ny mpandraharaha ary hisorohana ny ratra mahazo ny mpiasa.
B. Sakano ny fidiran'ny raharaham-bahiny. Toy ny hoe, rehefa mitondra kitapo lehibe ianao dia hisoroka ny harona ao anaty fitoeran-javatra mifangaro.
C. Raha manana caking lehibe ny vokatrao dia afaka manapaka azy ilay grid.
6. Momba ny fitaovana. Fitaovana vy tsy metaly 304. Kilasy sakafo. Izy io koa dia azo vita amin'ny vy tsy metaly 316 sy 316L raha mila izany ianao.
A. Fitaovana vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Kilasy sakafo, mora be amin'ny fanadiovana.
B. Ao anatin'ilay tanky, feno fitaratra feno izy ho an'ny tanky ao anatiny ary koa zana-kazo sy kofehy. Tena mora amin'ny fanadiovana.
C. Eny ivelan'ny fiara mifono vy, mampiasa teknolojia Weld feno izahay, tsy misy vovoka sisa tavela amin'ny banga welding. Tena mora amin'ny fanadiovana.
7. Tsy misy visy. Fitaratra feno fitaratra ao anaty fitoeran-drano mifangaro, ary koa kofehy sy hazo, izay mora diovina toy ny valaka feno. Ny milina mpanamory vovoka sy ny vatan-kazo lehibe dia iray manontolo, tsy misy visy, tsy mila miahiahy fa mety hidina ao anaty akora ilay visy ary handoto ilay fitaovana.
8. Security switch, ny mixer dia mijanona tsy mandeha raha vantany vao misokatra ny sarony. miaro ny fiarovana manokana an'ireo mpandraharaha izy io.
9. Strut Hydraulika: sokafy moramora ny sarony, amin'ny androm-piainana lava.
10. Timer: azonao atao ny mametraka ny fotoana fampifangaroana, azo apetraka amin'ny 1-15minute izy io, miankina amin'ny vokatra sy ny habetsahan'ny fampifangaroana.
11. Lavaka famoahana: safidy roa: manual sy Pneumatika. Manoro hevitra izahay ny hampiasana ny famonoana pneumatic raha misy ny famatsian-drivotra ao amin'ny orinasa. Mora kokoa ny miasa, eto ny switch switch, ampandehanana izany, misokatra ny flap misy anao. Hivoaka ny vovoka.
Ary, raha te-hifehy ny fikoriananao ianao dia mampiasa famoahana tanana.
12. Kodiarana ho an'ny fivezivezena maimaimpoana.
MODELY TDPM 100 TDPM 200 TDPM 300 TDPM 500 TDPM 1000 TDPM 1500 TDPM 2000 TDPM 3000 TDPM 5000 TDPM 10000
Fahafahana (L) 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000
Volume (L) 140 280 420 710 1420 1800 2600 3800 7100 14000
Manome isa 40% -70%
Halavany (mm) 1050 1370 1550 1773 2394 2715 3080 3744 4000 5515
Sakany (mm) 700 834 970 1100 1320 1397 1625 1330 1500 1768
Hahavony (mm) 1440 1647 1655 1855 2187 2313 2453 2718 1750 2400
Lanja (kilao) 180 250 350 500 700 1000 1300 1600 2100 2700
Herin'ny hery (KW) 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 30 45 75
Fanovana vonjy taitra
mampiasa dingana fanamafisana miondrika isika, afaka mampihena ny lanjan'ny sarom-bilany ary miaraka amin'izay, afaka mitazona ny tanjaky ny sarony.
2. Volavola boribory boribory
Ny tombony dia tsy misy faran'ny maty hanadiovana sy ho tsara tarehy kokoa.
3. peratra famehezana silika
Vokatry ny famehezana tena tsara, tsy misy vovoka mivoaka rehefa mifangaro.
4. Feno welding & voalamina
Ny toeran'ny milina dia milina feno, ao anatin'izany ny kofehy, ny frame, ny tanky, sns. Voalamina ao anaty tank ny fitaratra, tsy misy faritra maty, ary mora diovina.
5. Taratasy fiarovana
6. Strut Hydraulika
Ny famolavolana miadana miadana dia mitazona ny bara fijanonan'ny hydraulic mandritra ny androm-piainana.
7. Fametrahana fotoana fampifangaroana
Misy ny "h" / "m" / "s", midika hoe ora, minitra ary segondra
Fitaovana fiarovana mba hisorohana ny ratra mahazo anao, ajanony ny fiara rehefa nosokafana ny fandrakofana tanky.
9. Fivoahan'ny pnemika
Manana taratasy fanamarinana momba ny patanty momba izany izahay
fitaovana fanaraha-maso valizy.
10. Sarony miolakolaka
Tsy fisaka izy io, aolaka, mifanentana tsara amin'ny barila fampifangaroana.
1. Ny fonosana ambony indrindra amin'ny fantsom-panafody dia azo namboarina araka ny tranga samihafa.
Ny valizy fanamainana vovoka maina dia azo entina amin'ny tanana na amin'ny pneumatically. Valve azo alefa: valve varingarina, valizy lolo sns.
3. Rafitra fitifirana
Ny blender mixer blender dia misy pump, nozzles ary hopper. ranon-javatra kely azo afangaro amin'ny vovoka miaraka amin'ity rafitra ity.
4. Fampihenana sy fanamafisana ny palitao roa
Ity milina mpanamory vovoka maina ity koa dia azo noforonina miaraka amin'ny fiasa hitazonana ny hatsiaka na ny hafanana. Manampia sosona iray ivelan'ny tanky ary apetaho amin'ny mpanelanelana mba hahazoana mangatsiaka na hafanana ilay fitaovana mifangaro. Ampiasao matetika ny rano amin'ny etona mangatsiatsiaka sy mafana ampiasana herinaratra ho an'ny hafanana.
5. Sehatra miasa sy tohatra
1. Indostrian'ny sakafo
Vokatra sakafo, akora sakafo,
additives sakafo fanodinana sakafo SIDA amin'ny sehatra isan-karazany,
ary amin'ny mpanelanelana amin'ny fanafody, fanaovana labiera,
anzima biolojika, akora fonosana sakafo koa no be mpampiasa.
2. Indostrian'ny bateria
Bateria fitaovana, anith bateria lithium
fitaovana, fitaovana cathode bateria lithium,
famokarana akora vita amin'ny karbaona.
3. Indostrian'ny fambolena
Famonoana bibikely, zezika, sakafom-biby ary fanafody fitsaboana biby, sakafo alikaola mandroso, famokarana fiarovana ny zavamaniry vaovao, ary amin'ny tany nambolena, fampiasana microbial, zezika biolojika, greening any an'efitra, indostrian'ny fiarovana ny tontolo iainana koa dia manana fampiharana marobe.
4. Indostrian'ny simika
Ny epoxy resin, polymer material, fluorine material, silicon material, nanomaterial ary ny rubber sy ny plastika indostria simika hafa; Ny fitambarana Silika sy ny silika ary ny akora simika tsy miharohary hafa sy ny akora simika isan-karazany.
5. Indostria feno
vokatra fiarovana tontolo iainana fibre zavamaniry,
latabatra azo hanina, sns
Famokarana sy fanodinana
Shanghai Tops Group Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina amin'ny rafitra fonosana vovoka sy granular.
Manokana amin'ny sehatry ny famolavolana, ny famokarana, ny fanohanana ary ny serivisy milina feno ho an'ny karazana vovoka sy vokatra granular izahay, ny tanjonay voalohany dia ny manolotra ireo vokatra mifandraika amin'ny indostrian'ny sakafo, indostrian'ny fambolena, simika indostria, sy ny sehatry ny farmasia ary maro hafa.
Serivisy sy kalitao
■ Fiantohana herintaona, serivisy maharitra
■ Manomeza fitaovana ilaina amin'ny vidiny mirary
■ Manavao tsy tapaka ny fikirakirana sy ny programa
■ Valio ny fanontaniana rehetra ao anatin'ny 24 ora
1. Mpanamboatra mixer vovoka indostrialy ve ianao?
Shanghai Tops Group Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra milina fangaro mixer ao China, izay efa tao amin'ny indostrian'ny milina fanamboarana nandritra ny folo taona. Namidinay ny masininay tamin'ny firenena 80 mahery manerana an'izao tontolo izao.
Ny orinasanay dia manana patanty famoronana vitsivitsy amin'ny famolavolana blender mixer mixer ary koa milina hafa.
Manana fahaiza-manao amin'ny famolavolana, ny famokarana ary koa ny manamboatra milina tokana na tsipika fanangonana iray manontolo.
2. Manana mari-pankasitrahana CE ve ny masinina mixer-nao?
Eny, manana taratasy fanamarinana CE mifangaro mixer kofehy izahay. Ary tsy ny mixer vovoka maina ihany, ny masininay rehetra dia manana taratasy fanamarinana CE.
Ankoatr'izay, manana patanty teknika sasantsasany amin'ny famolavolana vovo-dronono mifangaro ao anaty milina izahay, ary koa milina mpameno maotera hafa.
3. Inona no vokatra azon'ny milina mpamono vovo-dronono ampiasaina?
Ny mixer-pitaire vertika dia afaka mitantana ny karazana vovoka na granule rehetra mifangaro ary ampiharina betsaka amin'ny sakafo, fanafody, simika sns.
Indostrian'ny sakafo: ny karazana vovo-tsakafo na granule rehetra mifangaro toy ny lafarinina, lafarinina oat, vovoka proteinina, vovo-dronono, vovo-kafe, zava-manitra, vovo-tsilo, vovo-dipoavatra, tsaramaso, vary, voamaina, sira, siramamy, sakafom-biby, paprika, vovoka cellulose microcrystalline, xylitol sns.
Indostrian'ny simika: ny karazana vovoka fikolokoloana ny hoditra sy ny tarehy na ny vovo-dronono mifangaro, toy ny vovoka voatoto, vovoka tarehy, loko, aloky ny maso, vovo-takolaka, vovoka manelatselatra, vovoka manasongadina, vovo-jaza, vovoka talcum, vovoka vy, soda lavenona, vovoka calciumate carbonate, poti-plastika, polyethylene sns.
4. Ahoana no fiasan'ny mixer masininina?
Fehikibo roa sosona izay mijoro ary mihodina amin'ireo anjely mifanohitra aminy mba hamoronana fivarotana amin'ny fitaovana samihafa mba hahatratrarany fahombiazan'ny fampifangaroana avo.
Ny kofehinay manokana dia tsy afaka mahita zoro maty amin'ny tanky mifangaro.
Ny fotoana fampifangaroana mahomby dia 5-10 minitra fotsiny, na dia kely aza ao anatin'ny 3 min.
5. Ahoana ny fomba hisafidianana mixer-pitaona indostrialy?
■ Misafidiana eo anelanelan'ny kofehy sy ny blender
Mba hisafidianana mixeur vovoka kely, ny zavatra voalohany dia ny manamafy raha mety ny mixeur vovoka varotra.
Ny mixer vovoka proteinina dia mety amin'ny fampifangaroana vovoka na granule isan-karazany amin'ny hakitroka mitovy ary tsy mora tapaka. Izy io dia tsy mety amin'ny fitaovana izay hitsonika na hihitsoka amin'ny hafanana avo kokoa.
Raha ny vokatrao dia ny fifangaroana dia misy akora manana hakitroka samy hafa be, na mora vaky, ary izay hitsonika na hikitikitika rehefa avo ny mari-pana, dia mamporisika anao izahay hisafidy ilay mixer.
Satria tsy mitovy ny fitsipiky ny asa. Ny fangaro amin'ny fantsom-boaloboka dia manosika ireo fitaovana amin'ny lalana mifanohitra mba hahatratrarana ny fahombiazan'ny fifangaroana. Saingy ny mixer paddle dia mitondra fitaovana avy any ambanin'ny tanky ka hatrany ambony, hahafahany mitazona ny fitaovana feno ary tsy hampiakatra ny maripana mandritra ny fifangaroana. Tsy hanao fitaovana misy hakitroky lehibe kokoa hijanona eo amin'ny farany ambany tank.
■ Misafidiana modely mety
Raha vao manamafy ny fampiasana ilay masinina mixer vovoka kely dia tonga amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny maodelin'ny volavola. Ny vovo-mixer an'ny milina avy amin'ny mpamatsy rehetra dia manana ny habetsahan'ny fampifangaroana mahomby. Raha ny mahazatra dia manodidina ny 70%. Na izany aza, misy ny mpamatsy sasany milaza ny maodelin'izy ireo ho totalin'ny fampifangaroana, raha toa kosa ny sasany toa anay dia miantso ny maodelin-tsiranoka blender mixer ho toy ny habetsahan'ny fampifangaroana mahomby.
Saingy ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia mandamina ny vokatra vokariny ho toy ny lanjan'ny lanja. Ianao dia mila manisa ny habetsaky ny mety mifanaraka amin'ny hakitroky ny vokatra sy ny lanjan'ny andiany.
Ohatra, ny mpanamboatra TP dia mamokatra lafarinina 500kg isaky ny andiany, izay ny refiny dia 0,5kg / L. Ny vokatra dia 1000L isaky ny andiany. Ny tadiavin'i TP dia ny blender mixer ribbon dia afaka 1000L. Ary mety ny maodely TDPM 1000.
Azafady mba jereo tsara ny maodelin'ny mpamatsy hafa. Hamarino tsara fa ny 1000L dia ny fahafahan'izy ireo fa tsy ny habetsany.
■ Kalitaon'ny blender mixer
Ny farany nefa ny tena zava-dehibe dia ny misafidy mixeur karazana ribôna misy kalitao avo lenta. Ny sasany amin'ny antsipiriany toy izao manaraka izao dia ho an'ny referansa izay misy ny olana mety hitranga amin'ny mixeur ribbonne roa.
Momba ny fonony, mampiasa dingana fanamafisana ny hiondrika isika, afaka mampihena ny lanjan'ilay sarony ary miaraka amin'izay dia afaka mitazona ny tanjaky ny sarony izy io.
Momba ny zorony 4 amin'ny sarom-bilany, manao ny famolavolana zoro boribory izahay, ny tombony dia tsy misy faran'ny maty hanadiovana sy ho tsara tarehy kokoa.
Peratra famehezana silônika, vokatra famehezana tena tsara, tsy misy vovoka mivoaka rehefa mifangaro.
Taratasy fiarovana. Manana fiasa 3 izy:
Momba ny fitaovana. Fitaovana vy tsy metaly 304. Kilasy sakafo. Izy io koa dia azo vita amin'ny vy tsy metaly 316 sy 316L raha mila izany ianao.
Tsy misy visy. Fitaratra feno fitaratra ao anaty fitoeran-drano mifangaro, ary koa kofehy sy hazo, izay mora diovina toy ny valaka feno. Ny kofehy roa sy ny vatan-kazo lehibe dia iray manontolo, tsy misy visy, tsy mila miahiahy fa mety hidina ao anaty akora ilay visy ary handoto ilay fitaovana.
Fiovan'ny fiarovana, mijanona tsy mandeha intsony ny masinina mixeur mixeur raha vao nosokafana ny sarony. miaro ny fiarovana manokana an'ireo mpandraharaha izy io.
Strut Hydraulika: sokafy moramora ny sarony miaraka amin'ny androm-piainana lava.
Timer: azonao atao ny mametraka ny fotoana fampifangaroana, azo apetraka amin'ny 1-15minute izy io, miankina amin'ny vokatra sy ny habetsahan'ny fampifangaroana.
Lavaka famoahana: safidy roa: manual sy Pneumatika. Manoro hevitra izahay ny hampiasana ny famonoana pneumatic raha misy ny famatsian-drivotra ao amin'ny orinasa. Mora kokoa ny miasa, eto ny switch switch, ampandehanana izany, misokatra ny flap misy anao. Hivoaka ny vovoka.
Kodiarana ho an'ny fivezivezena maimaim-poana.
Hamehezana fefy: ny fitsapana amin'ny rano dia afaka mampiseho ny vokan'ny famehezana ny vatan-kazo. Ny famoahana vovoka avy amin'ny famehezana ny hazo dia manahirana ny mpampiasa foana.
Famoahana tombo-kase: ny fitsapana amin'ny rano dia mampiseho koa ny vokatry ny famehezana. Mpampiasa maro no nihaona tamin'ny famoahana.
Fehin-kibo feno: ny lasitra feno dia iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ny masinin-tsakafo sy fanafody. Mora ny manafina vovoka ao anaty banga, izay mety handoto vovoka vaovao raha ratsy ny vovoka sisa tavela. Fa ny valiha feno sy ny poloney dia tsy afaka manome elanelana eo amin'ny fampifandraisana fitaovana, izay afaka mampiseho ny kalitaon'ny milina sy ny traikefa fampiasana.
Volavola fanadiovana mora: ny mpanadio kofehy helika mora fanadiovana dia hamonjy fotoana sy hery betsaka ho anao izay mitovy vidiny.
6 .Inona ny vidin'ny milina fangaro mixer?
Ny vidin'ny milina mpanamory vovoka dia mifototra amin'ny fahaiza-manao, safidy, fanaingoana. Azafady mba mifandraisa aminay mba hahazoana ny vahaolana mixer vovoka sahaza anao sy manolotra anao.
7. Aiza no hahitana milina mpanamory vovoka proteinina amidy eo akaikiko?
Manana agents izahay any Eropa, USA.
Manaraka: Blender Blender
Mpangaro amin'ny vovo-dronono maina
Mpifangaro kofehy mitsivalana marindrano
Mpifangaro kofehy marindrano
Mixer Blade Ribbon
Mixer Blender mixer
Masinina mixeur Blender mixer
Blender mixer Blender
Fangaro mixer ho an'ny vovoka
Fangaro mixer for sale
Masinina mpanamory kofehy
Vidin'ny milina fangaro mixer
Vidin'ny mixer an'ny kofehy
Fangaronam-pandrefesana miharo horonantsary
Fangaro mixer karazana
Mpangaro amin'ny tadin'ny spiraly